Maalinta: 8-ka July, 2019
gudbinta korontada Inc. (TEIAS) ee qalad ka dhaca mid ka mid ah xarumo ugu weyn jaqsiinayso waa sidaas joojiyay at mar Bursaray Bursa. Ka baaqashada saacadaha 14.00 ee saldhigga TEIAŞ [More ...]
TCDD Gaadiidka Agaasimaha Qeybta KPSS iyada oo aan loo baahnayn shaqaalayaasha Machinistayaasha ayaa la kiraysan doonaa. Musharixiinta lagu darayo liiska si ay u ogeysiiyaan IŞKUR waxay ku soo gudbin doonaan dukumiintiyada taariikhda 08.08.2019-09.08.2019. Musharrixiinta waxay shakhsi ahaan u keeni doonaan dukumiintiyada. Bixinta dokumentiyada [More ...]
TCDD Transportation Inc. waxay soo saartay soo iibsi hore ee dembiilayaasha hore iyo dadka naafada ah Musharrixiinta oo lagu dari doono liiska kama dambaysta ah ee lagu ogeysiiyay IŞKUR sida ku cad qiimeynta dhibcaha KPSS oo leh koobi dukumiintiyada hoos ku taxan si looga qaybgalo baaritaanka afka. [More ...]
Larende Underpass Iftiimin: Kooxo ka Shaqeynaya Aqoonta Sayniska ee Degmada Karaman ayaa ka bilaabay shaqada laydh bixinta bixitaanka Larende Underpass. Dowlada hoose ee Karaman waxay sii wadaa howlaheeda laydhka ee meelaha iftiinka aan ku filneyn. Isku xirka xarunta Karaman iyo xaafada Larende, [More ...]
Jadwalka basaska ee Aagga Meejeedpark Aagga
23. Sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa dhaqanka iyo farshaxanka Malatya ee caalamiga ah iyo Bandhigga Apricot, Dowlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya waxay bilowday inay abaabusho adeegyada basaska Mişmişpark Fairgrounds. 7 Laga bilaabo Axadda ilaa Luulyo 14.00 illaa saacadaha 24.00, [More ...]
Bandhigga Bandhigga Turki ee Trabzon Skies
Xiddigaha Turkiga, oo ah kooxda kaliya ee jimicsiga ka sameeya adduunka oo ay la socdaan diyaaradaha xNUMX supersonic airlines, ayaa magaalada ku qabtay banaanbax mudaaharaad ah oo ay ku abaabuleen ururka 'Trabzon Governorship, Trabzon Metropolitan Municipality' iyo Dawladda Hoose ee Ortahisar. Xeebta Ortahisar iyo matxafka Hagia Sophia [More ...]
Qeybta Boliska Magaalada Mersin ee Qeybta Dambibaarista ee Booliska Magaalada Qeybta Booliska Boliiska, maalmahan marka jawigu si wanaagsan u kululaado, muwaadiniinta, gawaarida dadweynaha si ay si nabad ah ugu safraan oo si nabdoon u xakameeyaan [More ...]
Khadad dheeraad ah oo laga soo bilaabo IETT ilaa Khadka Maslaka ee Yenikoy
Sababta oo ah shaqada asphalting ee socda ee Buundada Fatih Sultan Mehmet, dadka reer Istanbul ee u safraya labada dhinac ee Bosphorus waxay xiiseynayaan Istinye-Cubuklu Ferry iyo Beykoz-Yenikoy motor. Agaasinka Guud ee Magaalada Istambul ee IETT, [More ...]
Dhimashada tareenka ee Chorlu, Gaadiidka TCDD ayaa soo bandhigay fiidiyoow ku saabsan xisaabteeda Twitter iyada oo cinwaanka 'We Carry Love'. Qoysasku waxay ficil-celin ku sameeyeen fiidiyoowga sannad-guuradii masiibada. 25 Çorlu halka boqolaal qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen [More ...]
Saxiixa baabuurka gudaha
Turkey ayaa Initiative Group (TOGG) Baabuurta, ayaa qayb ka ah model ah SUV korontada ku bilaaban doono wax soo saarka mass ee 2021 of Automotive Supply Industry (TAYSAD) soo saari doonaa xubnaha. Automobile Enterprise Group 62 Turkey bilaabay wadahadalo kula shirkadda, heshiis qaar ka mid ah [More ...]
Qoyska Otokar waxay ku kulmeen Sabtida Dhaqanka ee Dhaqanka
6, oo ah sadaxaad ee ciida gudniinka oo dhaqan ahaan ay soo abaabushay shirkadda Koç Group Otokar ee loogu talagalay carruurta shaqeeya, ayaa ka dhacday Sabtiga Sabtiga xarunta Otokar's Sakarya plant. Gudniinta 215 waxay ku dhowdahay 800 iyada oo laga qaybgalyo carruurta iyo qoysaskooda [More ...]
RayHaber 08.07.2019 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 08.07.2019 ee nidaamkayaga.